ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: အချစ်သည် ...တစ်ခါတစ်ရံ၌.....(အပိုင်း - ၈)
(ဒေါ်ချို)ပြောခဲ့ တုန်းကတော့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ပါဘူးဆို
(နုငယ်) ဒါကြောင့်လဲ သမီးကိုယ်တိုင် အမေ့ ကို အမှန်အတိုင်းဝန်ခံပြီး တောင်းပန်နေတာပါ။ သမီးရဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်လေးများ တစ်ခါလောက်တော့ ခွင့်ပြုပါလား အမေ။
(ဒေါ်ချို)ကောင်းပြီလေ သမီးသိထားဖို့က ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ လမ်းအရ ကောင်းလည်း သမီးပဲစံရမှာ ဆိုးလဲ သမီးပဲ ခံရမှာပဲ။
နောင်တဆိုတာကို နောင်မှတမနေရအောင်တော့ သမီးသတိထားဖို့ ကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခုက ခုသမီးကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ် ခွင့်ဆိုပြီး အမေပေးထားပြီးပြီ။ သမီးဘက်ကလဲ ဒါဟာမှားနေပြီး မှားနေမှန်းသိပြီဆိုရင်တော့ နောက်ကိုပြန်လှည့်နိုင်ရမယ်။
နောက်တစ်ခုက မိဘတွေမျက်နှာပျက်အောင် မိဘတွေမျက်နှာငယ်အောင် သမီးအနေနဲ့ မိုက်ရူးရဲ ဆန်ဆန် မဆုံးဖြတ်ပါဘူးလို့ တော့ ဂတိပေးရမယ်။ ဘယ်လိုလဲ။
(နုငယ်) ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းပါပြီ အမေ။
ဒေါ်ချို ပြောပြီးသမီးရှေ့ ကနေ ထထွက်လာလိုက်သည်။ သမီးနှင့်သူ ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အနည်းငယ်စိမ်းကားနေကြသည်မှာကြာပြီ။ အရင်လို နွေးနွေးထွေးထွေးမရှိကြ။ သမီးအခြေအနေကိုကြည့်ရသည်မှာလဲ ဇွတ်တားနေလျှင် သူမဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမည့်ပုံ။ သမီးရဲ့ စိတ်နှင့် သူ့စိတ်က တော်တော်လေးကိုတူသည်။ ပြန်မပြောနားမထောင် ခပ်အေးအေးနှင့် လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်မည့်ပုံ။ ဒါဆိုလျှင်ရင်ကျိုးရမည်က မိဘသာ။ ပြီးတော့ မောင်သုတ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သမီး ကသာ စိတ်မ၀င်စားလျှင် အတင်းမစီစဉ်ပါနှင့်လို့ ဆိုထားသည်။ လောလောဆယ် သမီးကိုလျှော့ပေးထားပြီး အခြေအနေကြည့်နေသည်က ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
ဟူး တော်ပါသေးရဲ့ ။ သူမ တင်းထားသောစိတ်များ လျှော့ ချပစ်လိုက်သည်။ အမေနှင့် အများကြီး အတိုက်အခံလုပ်ပြီး စကားများရမည်ဟု သူမ မျှော်လင့်ထားသည်။ ခုလိုမျိုး အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်သွားမည်ဟု ထင်ကိုမထင်ထားမိ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ ကိုအများကြီး သတိထားဖို့ တော့ လိုသည်။ ဘာမှမပြောပဲ ခုလို အမေ လျှော့ ပေးသွားချင်းသည် သူမ အတွက် ပိုပြီးသတိထားရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။ အမေ့ သဘောက လွယ်မယ်ဆိုလျှောက်ကြည့် ဆိုတာလိုမျိုး ..ဟူး မောင် တစ်ယောက် ဘာအမှားမှ ထပ်ပြီး မလုပ်ပါစေနဲ့ လို့ သာ သူမ ဆုတောင်းနေမိသည်။ သို့ သော်..
သူမ ဆုတောင်းမပြည့်ပါ။ မောင် တစ်ယောက်တော့ ဖြစ် second year ကိုကျသည်။
(နုငယ်) မောင် .. နုငယ်တော့ နားကိုမလည်နိုင်တော့ ဘူး။ ၁၀ တန်းစာမေးပွဲဖြေသလောက်တောင် အားမစိုက်ရတဲ့ တက္ကသိုလ် စာမေးပွဲကို ကျအောင်ဖြေရသလား။ နေပါအုန်း မောင့်ရည်မှန်းချက် မောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတာ ဘာလဲ မောင်.
တစ်စိတ်လောက် နုငယ် နားလည်အောင်များ ရှင်းပြနိုင်မလားလို့
(ထွန်းသစ်)နုငယ် နဲ့ အမြန်ဆုံးနီးအောင် မောင် ပိုက်ဆံပဲရှာချင်တယ်.. နုငယ်ရဲ့ အမေ အားကျတဲ့ ဆရာဝန် ဒေါက်တာကြီးလို မောင်လဲ အခြေတကျ အမြန်ဖြစ်ချင်တယ်. ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာက ကျောင်းပြီးသွားလဲ ဘာအာမခံချက်မှ မရှိ်ဘူးလေ။
(နုငယ်) တော်တော့ မောင်။ တော်တော့ ဘ၀ ဆိုတာ အဆင့်ကျော်လို့ မရဘူးလေ. ခုချိန်က ပညာရှာရမယ့် အရွယ် ဒီချိန်မှာ ပညာပြည့်မှ နောင်တစ်ချိန်မှာ မောင် ရှာမယ်ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံကို ရှာလို့ ရမှာပေါ့။ နုငယ် တို့ ငယ်ပါသေးတယ်. အချိန်တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဘာလို့ များ..
(ထွန်းသစ်) မောင် နုငယ်နဲ့ တူတူနေချင်ပြီ. အမြန်ဆုံးနီးချင်ပြီ.
(နုငယ်) အဟင်း.. တူတူနေဖို့ က မောင့်အတွက် အဲလောက်တောင်အရေးကြီးသလား။
(နုငယ်)ဟုတ်တယ်လေ တူတူနေဖို့ က မောင့်အတွက် အဲလောက်တောင် အရေးကြီးသလားလို့ .
(ထွန်းသစ်) မင်း ..မင်း ..ဟာကွာ .... တောက်.. မင်း မင်း..ငါ့ရဲ့ အချစ်ကို အဲလောက်တောင် အထင်သေးပြီး စော်ကားလှကြီးလား..
(နုငယ်)တစ်ခါတစ်လေ မောင်နဲ့ ကျွန်မ အယူအဆချင်းကွာလွန်းနေတယ်။ မောင်ချစ်နေတာလဲ ကျွန်မသိတယ်။ ကျွန်မချစ်နေတာလဲ မောင်သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြားထဲမှာ ကွာဝေးလွန်းနေသလိုပဲ။ ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းကို မသ်ိဘူး။ စိတ်ဆိုးသွားမှန်းတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး တစ်ခါတစ်လေ မောင့် ကိုကျွန်မ အားမလို အားမရ အရမ်းဖြစ်တယ်။ ဘ၀ အတွက်ကြိုးစားမှုမှာ မောင် ကျွန်မကိုမမှီဘူး။ ဒီင်္ည အရက်သွားသောက်မနေနဲ့ နော်။ ကျွန်မကို အကြောင်းပြပြီး အရက်တွေ သောက်သောက်နေတာ ဒီတစ်လထဲမှာ နှစ်ခါ ရှိသွားပြီ။ ကဲ ကျွန်မ ပြန်တော့ မယ်မောင်။ လိုက်မပို့ နဲ့ တော့ ။
ကျွန်မ မမြင်ဘူး ဆိုပြီး ကွယ်ရာမှာတော့ လုပ်ချင်ရာ မလုပ်နဲ့ ။ ကျွန်မကို ညာရင် လုံးဝ ခွှင့်မလွှတ်ဘူးနော်.
မင်းကွာ..မင်း ငါ့အချစ်ကို စော်ကားလိုက်တာ။ ထွန်းသစ် ဘာမှတော့ သူမကို ပြန်မပြောလိုက်ပါ။ သူကိုယ်တိုင်မှ သူမနှင့် ကင်းအောင် မနေနိုင်သေးပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ သူမစကားပြောသည်မှာ ရင့်သီးလွန်းသည်။သူမ၏ စိတ်ကို ပိုသိလာလေလေ ထွန်းသစ် သူမကို ကြောက်လာလေလေပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ သူကိုယ်တိုင်ပင် သတိမထားမိသော သူ့ စိတ်အား သူမ နားလည်လွန်းသည်။ တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းချစ်တတ်သလောက် တစ်ခါတစ်ရံ ခုလို တစ်နင့်တစ်ပိုးပြောတတ်သော သူမအား သူကိုယ်တိုင် ဘယ်လို နားလည်ရမှန်းကိုမသိ။ခုတော့ သူ့ ရင်တွေ ပူသည်။ လမ်းထိပ်က ဆိုင်မှာ ခုလောက်ဆို ဟိုကောင်တွေ ၀ိုင်းလောက်ပြီ။ ဒီလိုနေ့ မျိုးမှ မသောက်လျှင် ဘယ်နေ့ ကို သူသောက်ရမည်နည်း။
(အောင်အောင်) ဟာ ငါ့ကောင်ကြီး ထွန်းသစ် ပေါ်မလာအတော်ကြာနေမှပဲ။ ခုဘာလဲ ငါတို့ ကို သတိရလို့ လား။ မင်းရဲ့ အချစ် ဆရာမလေးနဲ့ အဆင်မပြေလို့ လား။ မင်းကွာ အရင် သူ့ ထက်လှတဲ့ ကောင်မလေးတွေတောင် မင်းလုပ်ချင်ရာ လုပ်လာတာပဲ။ ဘယ်နှစ်ခါများ ဂရုစိုက်နေလို့ တုန်း။ ခုမှ..ဒီ အချစ်ဆရာမလေး ကျမှ ..မင်း
(ထွန်းသစ်)လောလောဆယ် သူ့ အကြောင်းမကြားချင်ဘူးကွာ။ ငါ့ ကိုတစ်ခွက်ပေး.
(ငပု) အေးပါကွာ ပေးပါတယ်။ ကဲ ..ရော့ ရော့ ..
(ညီသစ်) ငထွန်း မင်းကြည့်လဲ လုပ်အုန်းနော်။ တော်ကြာ မင်းကောင်မလေးနဲ့ ပြသနာ ဖြစ်နေအုန်းမယ်။ ဒီကောင်တွေ မြှောက်ပေးတိုင်း လျှောက်လုပ်မနေနဲ့ ။
ထွန်းသစ်ကတော့ မကြားပါ။ သူ့ စိတ်ထဲ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက် သောက်နေသာတာ သိသည်။ ကျန်တာဘာမှမကြား ဘာမှလဲ မသိချင်။လောကကြီးကို ခဏလောက် သူမေ့ ထားလိုက်ချင်သည်။ ခုနက သူမပြောသွားသော စကားသည် သူ့ အချစ်ကိုလဲ စော်ကားသည်။ ပြီးတော့ သူရှက်လဲ ရှက်လွန်းသည်။ အဘယ့် ကြောင့် သည်လို စကားမျိုး သူမနှုတ်က ပြောထွက်သနည်း။
ဒီနေ့ မောင့်ကိုပြောလိုက်တာ လွန်သွားမှန်း သူမသိသည်။ အမှန်တော့ မောင့်ကိုအားမလို အားမရနှင့် သူမ စိတ်ဆိုးဆိုးနှင့် ပြောလိုက်မိချင်သာ။ မောင်ကလဲလွန်သည်။ သည်စာမေးပွဲလေးကိုတောင် ကျအောင်ဖြေသည်။ ဘာမှအားစိုက်ထုတ် စရာမလိုသော စာမေးပွဲအား ကျအောင်ဖြေသည်။ ကျောင်းလဲမှန်မှန်သွားနေသည်။ ကျူရှင်လဲ ယူသေးသည်။ ဒါတောင်မှ ကျသည်။ တစ်ကယ်ပဲ အမေ ပြောသလိုမျိုး လူတစ်ယောက်၏ ပျက်နေပြီးသားစိတ်တစ်ခုအား သူမပြုပြင်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတာ မှားနေပြီလား။ ပြီးတော့ မောင့်ကို အရာရာ လိုက်ထိန်းနေရတာကို သူမ မကြိုက်။ တစ်ကယ်ဆို ကိုယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ကိုယ်သာ နေသင့်သည်။ ခုတော့ သူမက ဒါမလုပ်နဲ့ လေ ဟိုဟာက ဒီလိုလုပ်ဆိုတာမျိုး အကုန်လိုက်ပြောနေရသည်။ တစ်ကယ်ပဲ ဘ၀အတွက် အားကိုးသင့်တဲ့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရော ဟုတ်ရဲ့ လား။ မောင့်ထံမှာ သူမစိတ်ကျေနပ်စရာတစ်ခုပဲ ရှိသည်။ ထိုအရာက မောင် သူမကို တစ်ကယ်ချစ်တယ် ဆိုတာတော့ သူမသိသည်။ နောက်တစ်ခု သူမလက်ခံထားသည်ကလည်း အချစ်တစ်ခုတည်းနှင့် ဘ၀ကိုတည်ဆောက်လို့ မရ။ ဟင်း.. ခုချိန်လောက်ဆို မောင်အရက်ဆိုင်မှာ တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်သောက်နေ လောက်ပြီ။ မောင့်ရဲ့ စိတ်ကို သူမနားလည်သည်လေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကို ချစ်တဲ့ အချစ်နဲ့ မောင်ဒီလောက်လေးတောင် မစောင့်စည်းနိုင်ဘူးလား။ ခက်တာပဲ မောင်ရယ် ခက်တယ်..
ဒီနောက်ပိုင်း တစ်ပတ်လောက်နီးနီးမျှ ထွန်းသစ်၏ အရိပ်အရောင်လေးတောင် နုငယ်မတွေ့ ရ။ ဘာလဲ ဘာလဲ ကျွန်မကို နောက်တစ်ခေါက် ထားခဲ့ ပြန်ပြီလား မောင်။ စိတ်ထဲမှာ မာန၏ အရိပ်အရောင်လေးတွေ ပြန်တောက်လာပြန်သည်။
နောက်ထပ် ၂ ပတ်လောက်ကြာပြီနောက် ထွန်းသစ် ပြန်ပေါ်လာပြန်သည်။
(နုငယ်) သြော် ပေါ်လာသေးသကိုး။နောက်တစ်ခေါက် နှစ်နဲ့ ချီပြီး ပြန်ပျောက်သွားပြန်ပြီမှတ်တာ။
(ထွန်းသစ်) အင်း အဲလိုပျောက်ချင်တာ။ မနေနိုင်လို့ ။ ဒါပေမယ့် မင်းစကားသံတွေတော့ မကြားချင်ဘူးကွ။ နားခါးတယ်။
မင်း မျက်နှာလေး မြင်ရရင်တော်ပါပြီ အလွမ်းပြေသလောက်ပေါ့။
(နုငယ်)သြော် ဒီလောက်ပဲလား။ ဒါဆိုလဲ လွယ်ပါတယ်။ ခက်တာမှတ်လို့ ။ ရော့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ယူသွား။ လွမ်းရင်ထုတ်ကြည့် အသံလဲ မကြားရဘူး။ တစ်ကူးတစ်ကလဲ ကျွန်မမျက်နှာကို လာကြည့်စရာမလိုဘူး။ မောင် သက်သာတာပေါ့။ တော်ကြာ ကျွန်မဆီ လာရင် မောင် ပင်ပန်းနေအုန်းမယ်။
(ထွန်းသစ်) မင်းကလဲ မှားနေသေးတယ်။
(နုငယ်) ဘယ်သူမှန်တယ် ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်စရာမလိုပါဘူး မောင်။ ဟုတ်တယ် ကျွန်မစကားပြောတာ လွန်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မောင် အဲဒီနေ့ က အရက်သောက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို နှစ်ပတ်တိတိ ပစ်ထားတယ်။ ဘာသံမှ မကြားဘူး။ အဲဒီနေ့ က မောင့်ကို ကျွန်မ ဘာမှာလိုက်လဲ။ ကျွန်မနောက်ကွယ်မှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်တယ်ပေါ့။ ဒီအချိန်ထဲကမှ ကိုယ့် ကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နောင်တစ်ချိန် မောင် ကျွန်မကို ဘယ်လို ဦးဆောင်မလဲ။ ကျွန်မထင်တာက မောင်ကျွန်မကို ချစ်တဲ့ အတွက် အရာရာကိုပြုပြင်နိုင်လိမ့် မယ်ပေါ့။ ခုတော့ ကျွန်မထင်တာမှားနေပြီထင်တယ်။
(ထွန်းသစ်) မဟုတ်ဘူး မင်းဘာလို့ ပြသနာသေးသေးကို ခပ်ကြီးကြီးဖြစ်အောင် ပုဒ်မတွေ အရမ်းတပ်နေရတာလဲ တစ်ကယ်ဆိုမင်းပြော ခဲ့ တာက ငါ့ အချစ်ကိုစော်ကားတာလေ။
(နုငယ်) မောင် ကျွန်မတို့ ၁၈ နှစ် ၁၉ နှစ် ရည်းစားထားနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ခုမောင်ချစ်နေတာ အဲလိုမျိုးများဖြစ်နေလားလို့ ။ အချစ် အချစ် အချစ် ဘာလုပ်လို့ ရလဲ။ ဟုတ်တယ် ချစ်တယ် သံယောစဉ်ရှိတယ်။ ပေါင်းစပ်ဖို့ ကြိုးစားမယ်။ ခက်ခဲမယ် ပင်ပန်းမယ် အတူတူ လက်တွဲပြီးရင်ဆိုင်မယ်။ တစ်နေ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလား
မောင် နားလည်တဲ့ အချစ်က ဘာလဲ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ မြို့ ထဲ လက်ကလေးတွဲပြီးလျှောက်သွား တစ်နေရာရာ ထိုင်ပြီးစကားပြော ပြီးရင်တွတ်တီးတွတ်တာနေ ပြီးရင် ညနေစောင်း အိမ်ပြန်ချိန် လမ်းခွဲကြ လွမ်းကြ အဲဒါမှ မောင်နားလည်တဲ့ အချစ်လား
(ထွန်းသစ်) အဟင်း မင်းလိုမျိုး အသည်းနှလုံးဒီလောက်မာပြီး သွေးအေးတဲ့ မိန်းမမျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့ ဘူးဖူး။ အံ့ရော။ အံ့ရော တစ်နေ့ တစ်နေ့ သီအိုရီတွေ ရွတ်နေတာနဲ့ ပြီးနေတာ။ အချစ်ရဲ့ နူးညံ့ချင်း ကြင်နာချင်း ဘာမှမသိဘူး။ အေးလေ မင်းနားလည်သလို ချစ်ပါ။ ငါလဲ ငါနားလည်သလို ချစ်တာပေါ့။
(နုငယ်) ကောင်းပြီလေ ဒါဆိုရင်လဲ ဘာလို့ များ ချစ်သူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုထားနေအုန်းမလဲ။ ကျွန်မတို့ လမ်းခွဲ လိုက်ကြတာပေါ့။
(ထွန်းသစ်) ဘာ..ဘာ ..လွယ်လှချည်လား ငယ်..
(နုငယ်)လွယ်တယ်လေ။ ကျွန်မက အချစ်အတွက်ရူးမိုက်မဲ့ မိန်းမ မှမဟုတ်တာ။ ဘိုင်ဘိုင်..
(ထွန်းသစ်) ဟေ့ မင်းအလို ထွက်မသွားနဲ့ လေ။ဟေ့ .နေအုန်းလေ..ဟာ..
ငယ့် ကို သူအံ့သြမိသည်။ ပြောပြောဆိုဆို ဆိုင်ထဲမှ ထပြီးထွက်သွားသည်။ သူပိုက်ဆံအမြန်ရှင်းပြီး ဆိုင်ရှေ့ ရောက်တော့ သူမ taxi ငှားပြီး ထွက်သွားလေပြီ။
ကဲ ဒီတစ်ပတ်ကြိုးစားပြီး နောက်တစ်ပိုင်းတင်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ မြန်မြန်ပြီးအောင် ရေးချင်ပေမယ့် ကြားထဲမှာ အချိန်အခက်အခဲလေးတွေ ရှိတာကြောင့် ကြာသွားတာပါ။ နောက်တစ်ပိုင်းကိုလဲ အတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင် တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်လို့ ။
ဘလော့ ဂါ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ရွှင်လန်းကြပါစေနော်...
Anonymous 21 August 2011 at 20:25
စံပယ်ချို 22 August 2011 at 00:21
ခုတော့ ရောက်နေရာက ဖတ်ခဲ့တယ်နော်.
Anonymous 22 August 2011 at 06:13
mabaydar 20 February 2012 at 22:48
Relationship တစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတွေ အများဆုံးလုပ်တတ်တဲ့ အမှားက အရေးအကြောင်းဆို လမ်းခွဲစကားပြောပြီး ယောကျာင်္းလေးတွေကို အကျပ်ကိုင်တာပဲ...
နုငယ်ပြောသွားတာ သေသေချာချာဆုံးဖြတ်ပြီး ပြောသွားတယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်က အပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ်... ချစ်ပါတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်သိသိ လမ်းမှန်အောင် မစဉ်းစားတတ်တဲ့ယောကျာင်္းက ဘ၀လက်တွဲဖော်အဖြစ် အားမကိုးလောက်ဘူး... ပြီးတော့ ဒီလိုကောင်မျိုးက ဘယ်လောက်ပဲချစ်ပါတယ်ပြောပြော ကိုယ့်စကားနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူး.. သူကလဲ သူ့မာနနဲ့ သူကိုး... အဲဒါမျိုးတွေက ခပ်ပျော့ပျော့ အိစိအိစိ မိန်းမတွေ သူတို့ ပြုသမျှနုပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ဟာတွေနဲ့ပဲ လိုက်တာ...
အဟီး... ဆော်တီး ပေါက်ကွဲနေတာ မဆိုင်တာတွေပါကုန်ပြီ...
အို.... တိုတိုပြောရရင်တော့ သဘောကောင်း ပညာတတ်တဲ့ ကိုသုတကြီးကို နုငယ်မကြိုက်လဲ ငါပဲယူလိုက်တော့မယ်... ဒါနဲ့ အဲဒိ ကိုသုတကြီးက ချောလား... ဟီး သူ့ပုံစံကိုသေချာ မမြင်ဖူးသေးဘူး..(စာထဲမှာရေးထားတာတွေကို မျက်လုံးနဲ့ အမြဲဖော်ကြည့်ဖြစ်လို့ပါ)...
ပျောက်နေသော ကျွန်မနှင့် မကာအို ခရီးတစ်ထောက်